1368nm 10mW DFB Butterfly လေဆာထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Box Optronics
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Fiber Coupled Lasers > DFB လိပ်ပြာလေဆာရောင်ခြည် > 1368nm 10mW DFB လိပ်ပြာလေဆာ
1368nm 10mW DFB လိပ်ပြာလေဆာ
1368nm 10mW DFB Butterfly Laser သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီးမြင့်မားသောကိုက်ညီသည့်လေဆာရောင်ခြည်တစ်ခုဖြစ်သည်။ DFB လေဆာချစ်ပ်သည်စက်မှုလုပ်ငန်းစံအရတံဆိပ်ခတ်ထားသော 14 pin လိပ်ပြာအထုပ်ထဲတွင် TEC နှင့် PD ပါရှိသည်။ ၎င်းတွင် H2O ဓာတ်ငွေ့တွေ့ရှိနိုင်သည်။
1368nm 10mW DFB လိပ်ပြာလေဆာ၏ ၁။ အကျဉ်းချုပ်
1368nm 10mW DFB Butterfly လေဆာ ၂။ နိဒါန်း
1368nm 10mW DFB Butterfly လေဆာရောင်ခြည်၏ထူးခြားချက်များ
အမြင့် 10mW output ကိုပါဝါ;
စက်မှုလုပ်ငန်း - စံ၊ 14PIN လိပ်ပြာအထုပ်၊
4. 1368nm 10mW DFB Butterfly လေဆာအသုံးပြုခြင်း
H2O ဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေတွေ့ရှိ။ ;
1368nm 10mW DFB လိပ်ပြာလေဆာရောင်ခြည်၏ 5. Electro-Optical လက္ခဏာများ (T = 25â„)
လှိုင်းအလျားအလယ်ဗဟို အိုင်စီ TL = 15ï½ž35â "ƒ CW 1367.5 1368 1368.5 nm
optical output ကိုပါဝါ ဖိုး - 10 - - mW
ဆင်ခြေလျှောထိရောက်မှု η CW output ကို 5mW 0.05 0.08 0.2 mW / mA
operating လက်ရှိ ဟုတ်ပြီ po = 10mW (CW) - 100 200 mA
လေဆာရှေ့သို့ဗို့အား VF CW output ကို 5mW - 1.2 2.0 V
အမှောင်လက်ရှိ Monitor ID - - - 0.1 μA
optical အထီးကျန်မှုတွေ ISO -10 <+ 70â " 30 - - dB
ဆွေမျိုးပြင်းထန်မှု Nosie Rin CW, output ကိုပါဝါ 5mW - -145 - dB
ကြိမ်နှုန်း F -5- 1002 MHz
ကြိမ်နှုန်းတုံ့ပြန်မှုပြား S21 IF = 60mA, 5MHz -1002MHz -0.75 - 0.75 dB
Thermistor လက်ရှိ ITC - 10 - 100 μA
လှိုင်းအလျားပျံ့ (EOL) Î” Î» ၂၅ နှစ်တာကာလကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည် - - ± 0.1 nm
လှိုင်းအလျားလက်ရှိကိန်း Î” Î» / Î” ကျွန်ုပ် - - 0.01 - nm / ma
၆။ အထုပ်ပုံဆွဲခြင်းနှင့် PIN-OUT အဓိပ္ပာယ် (ယူနစ် - မီလီမီတာ) ၁၃၆၈nm 10mW DFB Butterfly လေဆာရောင်ခြည်
7. 1368nm 10mW DFB Butterfly လေဆာရောင်ခြည်၏ပို့ဆောင်ခြင်း၊ သင်္ဘောတင်ခြင်းနှင့်အမှုဆောင်ခြင်း
hot Tags:: 1368nm 10mW DFB လိပ်ပြာလေဆာရောင်ခြည်၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ လက်ကားရောင်းဝယ်မှုစက်ရုံ, စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော၊ အမြောက်အများ၊
1368nm 10mW DFB လိပ်ပြာလေဆာ Diode